Brand24: Iji Ntinye Nlekọta Na-echebe ma Na-amụba Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Anyị na onye ahịa anyị na-ekwu okwu n’oge na-adịbeghị anya gbasara iji igwe na-elekọta mmadụ na-eme ihe, ọ masịrị m na ha adịghị mma. Ha jiri obi eziokwu chee na ọ bụ oge, na ha enweghị ike nweta nsonaazụ azụmaahịa na ndị ahịa ha na-atụgharị na Facebook na saịtị ndị ọzọ. Ọ na-agbagha na nke a ka bụ nkwenye zuru oke site na azụmaahịa mgbe afọ iri gachara ịmụ etu esi etinye usoro na ngwa iji nyere aka. Naanị 24% nke ụdị na-ekwu na ha na-eme na-elekọta mmadụ na-ege ntị
Ige nti mmadu bu usoro nke iji ngwa oru nleba anya nke oge iji gee nti maka akara aka gi, ngwa ahia gi, ndi mmadu ma obu ndi ulo oru gi na ntaneti, ya na ka ha kwue oge. Ngwá ọrụ pụrụ iche dị mkpa n'ihi na igwe ọchụchọ anaghị akọ akụkọ a n'oge - na - efukarị ọtụtụ mkparịta ụka na saịtị mgbasa ozi kpamkpam.
Kama ịba ụba site na ngosipụta nke ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya, anyị gosipụtara ha etu o si arụ ọrụ. Anyị anwalela Brand24 ruo ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa ugbu a ma hụ nfe nke ịtọlite ​​ma nyochaa ụdị nke anyị, ndị mmadụ, ngwaahịa na ụlọ ọrụ nke anyị site na ikpo okwu - wee mata mgbe enwere ohere. Brand24 nwere interface dị ọcha, dị ọnụ ala, ma nwee ọkwa ntanetị zuru oke.
Iji Nlekọta Nlekọta Na-echebe ma Na-amụba Azụmaahịa Gị
Anyị gosipụtara ndị ahịa anyị otu esi eme ka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ọdịmma nke azụmaahịa ahụ, na-agafe ọtụtụ ndapụta:
Service - anyị gbara ajụjụ ụfọdụ wee mata ebe akpọrọ akara ha na ntanetị, mana onweghị onye si ụlọ ọrụ ha zara. Ọ bụ furu efu ohere iji nweta nke a ọjọọ ọnọdụ na-enyere otu n'ime ndị ahịa ha si… ma ha Agbaghara ya. Companylọ ọrụ ahụ amataghị na mkparịta ụka na-eme ebe anaghị akpado ha na mkparịta ụka ahụ.
Sales - anyị gbara ụfọdụ ajụjụ na ọrụ ha ma gosi ha ebe ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ịntanetị nọ na-ajụ maka ezigbo ọrụ ha ga-enye… mana nzaghachi ha bụ netwọkụ olile anya niile na-anwa ịnye ụfọdụ ndụmọdụ. Cheedị ma ọ bụrụ na otu onye ahịa ha bara uru ma nye ụfọdụ nzaghachi ọkachamara. Onye ahia ohuru? 54% nke ndị na-ere ahịa B2B kwuru na ha sitere na mgbasa ozi mmekọrịta
Promotion - ụlọ ọrụ ahụ gara ụfọdụ ọrụ ụlọ ọrụ ebe ha na-akwalite ọrụ ha. Anyị gosipụtara ha ebe ndị ọzọ nọ na ụlọ ọrụ ha nọ na-ahazi nzukọ haziri na ndị nwere ike ịre ahịa tupu ihe omume ahụ site na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbasa ozi ịzụ ahịa 93% nke mkpebi ndị ahịa na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Marketing - ụlọ ọrụ ahụ na-eme ụfọdụ ahịa ọdịnala mana ọ naghị eme ka ndị mmadụ gaa na saịtị ha maka ozi ndị ọzọ. Na saịtị ha, ha nwere ebook na akụrụngwa ndị ọzọ, mana ha anaghị akwalite ha n'ịntanetị. Anyị gosipụtara ha ka ndị asọmpi ha si na-akwado ọdịnaya na ịkwọ ụgbọala na-eduga na peeji nke ọdịda.
Njide - Anyị gosiri ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enyere ndị ahịa ha aka n'ịntanetị, na-enye nnukwu nkwado site na ọwa ọ bụla… otu ndị ahịa si chọọ ya. Ọbụghị naanị ụzọ dị ukwuu iji jigide ndị ahịa gị, mana ikwe ka ndị ahịa ọzọ ga - ahụ nnukwu ọrụ. Naanị 39% nke azụmaahịa na-akọ site na iji data ndị ahịa na ụkpụrụ omume iji kpụzie usoro azụmaahịa
Nghọta - Anyị jụrụ etu ha si enweta nzaghachi maka ngwaahịa na ọrụ ha ma ha kwuru na ha mere nyocha oge ụfọdụ na ịkpọ oku na ndị ahịa. Anyị gosipụtara ha otu ha ga-esi mee nyocha dị iche iche na soshal midia iji nweta nzaghachi na-aga n'ihu na ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike na-etinyeghị nnukwu ego. 76% nke ndị ahịa ahịa na-ekwu na ọ dị ha mkpa itinyekwu uche na data iji nwee ihe ịga nke ọma
mmetụta - ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị na-ere ahịa na ndị mmekọ na ụlọ ọrụ ndị ama ama, mana ha amataghị ihe ndị a ma metụta ụfọdụ n'ime ndị ahụ na ụlọ ọrụ nwere ọnlaịnụ. Anyị gosipụtara ha otu ha ga - esi chọta ma rịọ enyemaka nke ndị na - eme ihe ike iji ruo ndị ọhụụ, ndị bara uru na-etinyeghị nnukwu ego na mgbasa ozi.
Ntughari - anyi gosiri ha otu ha ga-esi nyochaa ma zaghachi na nkatọ na-adịghị mma emere na ntanetị na ihu ọha. Ọ bụghị naanị na ha nwere ike ịzaghachi, ha nwere ike ịnye nzaghachi nke na-enye ndị ahịa ndị ọzọ chọrọ ịmatacha etu ha si elekọta ọnọdụ ndị a.
Nyocha - anyị nyere ha ọtụtụ saịtị nyocha dị iche iche na ụlọ ọrụ ha, ụfọdụ ndị ha na-amadịghị adị. Anyị chọtara ha site na ịme nyocha banyere ebe a na-akpọ ndị ha na-asọ mpi. 90% nke ndị na-azụ ahịa na-atụkwasị obi na ndị ọgbọ ha tụkwasịrị obi karịa 14% bụ ndị tụkwasịrị obi na mgbasa ozi
content - mgbe anyị gosipụtara mmekọrịta nke ndị asọmpi ha, anyị nwere ike ịchọpụta mkparịta ụka zuru ezu nke nwetara ọtụtụ elebara anya - ohere zuru oke iji dee ebook ma ọ bụ hapụ ozi ederede.
Search Organic - anyi gosiputara ha otu esi ekekọrịta ihe omuma na-eduga na ntaneti, nke dugara na saịtị ndi ozo na-ekerita ha, na-emeputa uzo di nkpa ma nwekwa ikike nke na-acho onu ogugu.
mbanye - Anyị gosiri ha etu ha ga - esi bido chọwa ma na - adọta ụlọ ọrụ ha site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Trends - Anyị gosipụtara ha etu isiokwu dị na ụlọ ọrụ ha si eto ma ọ bụ belata oge, na-enyere ha aka ịme ahịa na ahịa ahịa ka mma banyere ngwaahịa na ọrụ ha.
ụka n'Ịntanet - anyi gosiri na obughi otutu mgbe ndi mmadu na eso uzo, ibe, ma obu mmadu na soshal midia - obu otu ha siri nye aka ha na netwok ohuru nke olile anya.
Malite Ọnwụnwa Brand Brand 24
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị dị na slack, Brand24 nwere ezigbo njikọta. Ọbụna nke ka mma, ha nwere ezigbo ọmarịcha mobile ngwa dị ka nke ọma.
Ntị na-ege ntị na ntanetị sitere na B2C
Tags: Ogbe24nghọta ndị ahịanjigide ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa na ọnọdụchọta ndị na-eme iheụlọ ọrụ na ọnọdụnnyocha ngwaahịaahanjikwa ahaNyochaChọọ Marketingna-elekọta mmadụ na-ege ntịmgbasa ozi mgbasa ozinlekota oruahịa ndị mmadụna-elekọta mmadụ na-eresoro nyocha ngwaahịa
Akwa isiokwu! Daalụ maka ikwupụta na ịtụ aro Brand24 ♥